Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona 8.4 qaqqabsiise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona 8.4...
Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona 8.4 qaqqabsiise
Pirojeektiin Xaanaa Balas yeroodhaan xumuramee hujitti galuu dhabuun isaa Itoophiyaa kasaaraa qarshii biliyoona 8.4’f saaxile. Rakkoon kuni kan mudate warshaan shukkaaraa kuni ijaaramee yeroodhaan waan hin xumuraminiif. Warshaan kuni kan eegalame woggaa 6 dura ta’us ammas yoomitti akka xumuramuu fi ijaarsi isaa inni hanga ammaa dhibbeentaa meeqarra akka gaye hin beekamu. Kan jechuun kasaaraan inni biyyattii irraan gayu itti fufa jechuudha.
Kasaaran kana fakkaatu kan biyyattii mudate sababa shankoorri heektaara 12,000 ol irratti dhaabamee ture woggaa 4 oliif dhaabataa erga ture booda jaaree sadarkaa faaydaa hin laanne irra gayuu isaatiin. Shankoorri jaaree faaydaan ala ta’uu isaatiin shukkaarri silaa omishamuu male kuntalli miliyoona 2’tti tilmaamamu dhabameera. Kuni qarshitti yoo shallagamu naannoo qarshii biliyoona 7.4 ta’a. Shankoora maasaa irratti jaaree bade ciruufis kana booda Itoophiyaan qarshii biliyoona 1.06 kaffalti.
Warshaa shukkaaraa Xaanaa Balas kan argamu daangaa naannoo Amaaraa fi Beenishangul irra. Warshaa kana dhaabuudhaaf jecha lammiilee 1,300 lafaa fi qabeenya isaanii irra buqqa’aniru. Omisha shankooraaf jecha pirojeektiin kuni woliigalatti lafa heektaara 75,000 fudhatee jira.
Rakkoo kana fakkaatuuf kan biyyattii saaxilaa jiru kubbaaniyaalee warshaa gurguddaa ijaaruuf humna maallaqaa, beekumsaa fi ogummaa teeknikaa gayaa hin qabne kan akka METEC ‘tti pirojeektii akkanaa laatuudha. Gama biraatiinis, faaydaa olola siyaasaaf jecha hoogganoonni biyyattii pirojeektota humna biyyattii ol ta’an heddu al tokkotti eegaluu isaaniti. Itoophiyaan yeroo tokkotti warshaa shukkaraa 10 eegaltus hanga ammaatti tokkichas guutummatti xumurtee hujii eegalsiisuu hin dandeenne. Wanti eegalame yeroon hin xumuramu taanaan faaydaa inni biyyaaf argamsiisu irra kasaaraa inni geessutu caala.
Previous articleDooniin Woyyaanee saffisaan dhidhimaa jirti
Next articleYoo diinni gochaa fi tankaarfii kee jibbe daandii sirrii irra jiraachuu kee hubadhu